के दीपिका–रणवीरको बिहे पनि इटलीमै होला? « Lokpath
के दीपिका–रणवीरको बिहे पनि इटलीमै होला?
मुम्बई । बलिउडका चर्चित जोडी दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको बिहेलाई लिएर बाक्लै चर्चा चलेको छ । अहिले त झन् के हल्ला चलिरहेको छ भने दीपिका र रणवीरले पनि इटलीमै बिहे गर्नेछन्, त्यो पनि विराट र अनुष्काले जस्तै ।
उनी दुवैले डेस्टिनेसन वेडिङको योजना बनाएको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । अहिले बलिउडमा सोनम कपूर र आनन्द आहुजापछि फेरि यी दुईको बिहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
खासमा दीपिकाको बड्डेको मौकामा भ्याकेसनका लागि गएका दुवै परिवारका सामुन्ने यो बताइएको थियो कि, रणवीर र दीपिकाको इन्गेजमेन्ट भइसकेको छ । एक भारतीय मिडियाले दिएको प्रश्नलाई आधार मान्ने हो भने यो जोडीले आउँदोन नोभेम्बरमै बिहे गर्ने भएका छन् । यी दुईको बिहेको तयारी पनि हुन थालिसकेको बताइएको छ ।
सम्भावना पनि के छ भने यी दुईको डेस्टिनेसन वेडिङ हुनसक्ने देखिन्छ । यस पहिले अनुष्का र विराटको बिहे पनि इटलीमै भएको थियो ।
दीपिका र रणवीरले पनि आफ्नो बिहेलाई मिडियाभन्दा पर लगेर गर्न चाहेका छन् । अझ अर्को खबर के पनि आएको छ भने बिहेपछि बस्नका लागि रणवीरले घर पनि लिइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,३०,बुधबार १४:०६
खोटाङ । पाँच युवाले विश्वकै अग्लो स्थानमा म्युजिक भिडियो छायांकन गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ज गरेका छन्
अजय देवगनकी छोरी न्यासाले सेयर गरिन् बोल्ड तस्बिर, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री काजोल र अभिनेता अजय देवगनकी छोरी न्यासा देवगन सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । उनले बेलाबेला
पहिरनका कारण ट्रोल बनिन् दीपिका पादुकोण, फ्यानहरुले गरे उर्फी जावेदसँग तुलना
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा निर्माता दीपिका पादुकोण यतिबेला आफ्नो आगामी फिल्म ‘गहरियान’को प्रोमोसनमा जुटेकी छिन् । हालै फिल्मको प्रोमोसनका
अभिनेत्री इभान रेचेल वुडले मर्लिन म्यानसनमाथि लगाइन् बलात्कारको आरोप
काठमाडौं । अमेरिकी अभिनेत्री तथा संगीतकार इभान रेचेल वुडले मर्लिन म्यानसनमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप लगाएकी छन् । अभिनेत्रीले सन् २००७